Hostinec u Klačkov - uMongameli
Sayilungisa indawo yokulala ukusuka kwi-1898 ngokubhekiselele kwizinto zokuqala kunye nezakhiwo zendawo. Ime amakhulu amahlanu eemitha ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye inika umbono omangalisayo weWhite Carpathians. Inokukhonza abahambi kwakhona. Phezulu ngamagumbi abahambi.
Indawo emnandi enokutya okumnandi nesiselo kwindawo entle yebhola ekhatywayo. Silandela indlela yonikezelo oluncinci lomgangatho kwaye kukhethwa imathiriyeli ekrwada yasekhaya. Sine-apple cider yethu evela ku-Sad u Harušťákov kunye nezinye iziqhamo kunye nemifuno. Abantu abaselula abavela kwihlabathi lonke beza kwipaki ye-permaculture ukuza kusinceda. Silungiselela iikonsathi, iikhosi zemfundo, singathanda ukuseka ithiyetha. Kutshanje sibhaptize isikhululo sokutshaja iibhayisekile zombane kwaye siceba ukurenta ii-e-bikes. Iindwendwe zethu ngabantu abalungileyo kakhulu, umoya kunye nokujonga ubukhulu becala bayabatsala kwaye ke basasaza amandla amahle.
Indawo yethu yokulala ibekwe ngezantsi kweyona ndawo iphakamileyo yeeCarpathians eziMhlophe ngombono omhle wokusingqongileyo. Yiya kwi-Jelenec lookout tower kunye ne-adrenaline encinci uya kunandipha umbono ngokupheleleyo. Ebusika, thatha i-skier okanye i-sledge ukuba kukho ikhephu elininzi kunye ne-skis. Kwi-cottage kaHoluby unokuba nebhiya, i-kofola okanye isidlo esilula.